“Herikerika Madagasikara” : tsy manao politika ankoatra ny sosialy (+vidéo) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
“Herikerika Madagasikara” : tsy manao politika ankoatra ny sosialy (+vidéo)
Fotoanan’ny fanampiana ireo mpiray tanindrazana izao araka ny fahitan’ny fikambanana “Herikerika Madagasikara” azy. Rehefa mikatso ny resaka politika dia fitsinjovana ny mpiara-belona ihany koa ny fiaraha-mizaka ny olana sosialy aterak’izay. Taorian’ny fanampiana ireo tra-boina noho ny fahavaratra dia ny fianakavian’ny voafonja politika indray no nitondran’izy ireo tolo-tanana. Na dia tsy mbola ireo mpikambana mivantana aza no nanolotra izao fanampiana izao dia tamin’ny alalan’ny solontenan’izy ireo izay mandalo an-tanindrazana ankehitriny no nahafahan’ny malala-tanana nanome izay voatsirambin’ny tanany ho fanampiana ireto voafonja ireto.
Namafisin’i Holy Radanielina fa “ny sosialy no politikan’ny fikambanana saingy manohana ny Ankolafy RAVALOMANANA izy ireo noho ny fanajany ny ara-dalàna”. Ny mpitarika io Ankolafy io rahateo dia tsy nitsahatra nitondra fanovana hanatsarana ny sosialin’ny mpiray tanindrazana nialohan’ny nanonganana azy tamin’ny 2009. Tamin’ity indray mitoraka ity ary dia vola mitentina 600.000 Ar miampy fanafody ilaina an-davanandro no natolotra ny fianakavian’ny gadra politika ary efa eo am-pandinihana ny hanohizana ny asa sahady ny fikambanana aorian’ny fivoriam-be izay hatao ny 17 sy 18 May hoavy izao.